Global Voices teny Malagasy » Tanora Espaniola Mitsoa-ponenana : “Tsy Niala Izahay Fa Noroahina!” · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 21 Marsa 2013 16:59 GMT 1	 · Mpanoratra Elena Arrontes Nandika (en) i Marianna Breytman, Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Eoropa Andrefana, Espaina, Fanoherana, Fifindràmonina, Hafanàm-po nomerika, Mediam-bahoaka, Politika, Toekarena sy Fandraharahàna
Iray amin'ireo vokadratsy mahatsiravina nateraky ny krizy ny tsy fananan'asan'ny tanora ao Espaina, izay tafakatra 55,6%. Manoloana io isa mampitebiteby io, niantso ny amin'ny tokony handraisana fepetra maika ny Vondrona Eoropeana tamin'ny taon-dasa. Taorian'ny 15 volana niasana tao amin'ny governemanta, nanolotra Drafitra ho an'ny Tanora Tsy An'asa  [es] ihany ny Antokom-bahoaka (kaonty Twitter @empleo_joven), izay nanome antoka fa tsy maintsy ho voavaha ny krizy ao amin'ny firenena. Niresaka momba ny “laingo maitso” izy ireo izay mariky ny famerenana ny toekarena amin'ny laoniny. Na dia izany aza, samihafa ny fihetseham-pon'ny olona ary tsy mitsaha-mitombo ny fahoriana  [es] hatramin'ny nanovana ny lalàna mifehy ny asa. Nampitandrina ny Sendikàn'ny mpiasa Espaniola fa raha tsy ampiarahana amin'ny fepetran'ny fampandrosoana ny drafitra, dia tsy hisy vokatra tsara ho azo.
Tamin'ny taona 2012, niakatra 302.623  [es] ny isan'ireo tanora Espaniola (eo amin'ny 15 sy 29 taona) monina any ivelany, tsy tanisaina intsony ireo tanora izay tsy nisoratra anarana tamin'ny ambasady. Maro ireo nandeha nitady ravinahitra tany ivelany noho ny antony ara-toekarena, ny tsy fananan'asa sy ny faharatsian'ny fepetra momba ny asa ao Espaina. Nanangana hetsika fanentanana mitondra ny anarana hoe No nos vamos, nos echan  (Tsy niala izahay fa noroahina) ny hetsika Juventudes sin Futuro (Tanora Tsy Manana Hoavy), nampiasaina tamin'ny tenifahatra tao amin'ny Twitter izany teny izany noho ny olana momba ny asa ankehitriny. Nindramina tamin'ny fitenin'i Marina de Corral, sekreteran'ny fifindramonina sy ny fifindramponenana izany anarana na fiantso izany, izay nilaza momba ireo fialàna faobe ho “saina tia andrakandrana (sahisahy) Eo amin'ireo Tanora ” [es] Ahitana sokajy isan-karazany ny bilaogy momba ny hetsika, ny sokajy iray ohatra natokana amin'ny fametrahana an-tsarintany ireo tanora mandeha mitady hoavy tsaratsara kokoa any ivelany, ary ahitana ireo izay mbola tsy nahita izay tadiaviny. Toy izao manaraka izao ny fanazavana ao amin'ny bilaogy:
Amin'ny fanindriana ireo teboka maro ao amin'ny sarintany  es], afa-mamaky ireo tantara sy zava-niainan'ireo tanora nandeha nitady izay mahasoa tany ivelany isika:
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2013/03/21/47061/
 Drafitra ho an'ny Tanora Tsy An'asa: http://www.empleo.gob.es/index.htm
 tsy mitsaha-mitombo ny fahoriana: http://www.publico.es/448773/la-generacion-del-salario-minimo
 niakatra 302.623: http://kaosenlared.net/component/k2/item/48579-juventud-sin-futuro-lanza-la-campaña-no-nos-vamos-nos-echan.html?tmpl=component&print=1
 No nos vamos, nos echan: http://www.nonosvamosnosechan.net/p/exilio-labroral.html
 saina tia andrakandrana (sahisahy) Eo amin'ireo Tanora: https://globalvoicesonline.org/2012/12/08/spain-young-emigrants-have-spirit-of-adventure/